Huawei inoshandisa SUSE Linux kune maseva ayo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Chinese nhare mbozha Huawei kusvika pari zvino ndaive nemaseva neWindows Server uye RHEL kubva kuMicrosoft neRed Hat zvichiteerana. Sezvaunoziva, iyo Chinese femu yakave yakakosha uye yakakura nekuda kwekutengeswa kwefoni mbozhanhare nezvimwe zvigadzirwa, asi pamusoro payo ese mafoni efoni anomira nekuita kwepamusoro achienzaniswa nemamwe emakwikwi epamusoro-soro asi pamitengo inonzwisisika.
Huye, Huawei zvakare inhengo yeLinux Foundation, sezvo iri kufarira kupa nekuenderana nesisitimu inoshanda Google Android, iyo yatinoyeuka, inoshandisa Linux kernel. Asi kuzvipira kwake papenguin chikuva kunoenderera mberi, uye ikozvino tadzidza kuti anga achitoshandisa RHEL kumaseva ake sezvatakataura, asi anoda kutanga kutsiva ino inoshanda sisitimu neMicrosoft ne SUSE Linux Enterprise (SLES).
Chinangwa chaHuawei che bvisa RHEL uye Windows Server ndeyekuti uwane kuita kwakawanda uye sunga mukana wepuratifomu yako yekuwanika nenzira inoshanda zvakanyanya nekuda kweSUSE. Shanduko haizove yakanyanyisa, uye ivo zvishoma nezvishoma vanodzora kuvapo kwemamwe masisitimu pane maseva avo, kudzamara vangove neSUSE yeKunLun RAS 2.0 maseva. Nekudaro, kunyangwe SUSE isiri hombe hofori seRed Hat, zvinoita sekunge iri kuramba ichidya inowanda pasi mubhizimusi chikamu nekuda kwesarudzo dzayo zvirinani, hunyanzvi hwekugadzira uye mubatanidzwa.
SUSE inoita kunge yakanyanya-inoshamwaridzika uye inomhanya paKunLun firmware ichibatanidza zvisina mutsindo neLinux kernel's ACPI simba manejimendi module, CPU control module, uye memory management module. Iwo akanakisa kuchinjika kune aya masisitimu ndiyo anopindura kumashandisirwo akanak. Saka gamuchira kuti uve mhando iyi yenhau nezvekushandisa kwakawanda uye kwakawanda Linux-yakavakirwa masystem, uye kunyanya kana izvo zvinoreva kuvandudzwa kwevatengi nemakambani ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Huawei inoshandisa SUSE Linux kumaseva ayo
Ubuntu MATE 17.04 ichauya neMATE 1.18